Percy Bysshe Shelley. Nhetembo nhatu pfupi dzebhavhadhe rake. | Zvazvino Zvinyorwa
Nhasi, Nyamavhuvhu 4, inoratidzira chiitiko chitsva che kuberekwa wemunyori wechiRungu Percy Bysshe Shelley. Uye chaizvo gore rino iyo bicentennial yekuburitswa kwe Frankenstein, wemukadzi wake Mary shelley. Vaviri ava chakakosha chirevo cheEuropean literary Romanticism. Mukurangarira kwake, ini ndinosarudza nhetembo idzi kurangarira.
2 Nhetembo dzakasarudzwa
2.1 Rudo, Rukudzo, Ruvimbo
2.2 Semwana mudiki ndaitsvaga zvipoko
2.3 Ndinotya kutsvoda kwako
2.4 Yakauya kubva kumafairies
2.5 Kana mazwi nyoro achifa
2.6 Philosophy yerudo
Akazvarwa muFarm Place, England, mu 1792. Kubva kumhuri yakapfuma kwazvo, akadzidza kune vane mbiri Eton uyezve kuYunivhesiti Koreji ye Oxford. Akadzingwa kubva ipapo nekuda kwekuburitsa chirevo chakanzi Iko kudiwa kwekusatenda kuti kuna Mwari. Pandinosvika ku London, akadanana nemusikana ane makore gumi nematanhatu, Harriet westbrook, waakatiza akaroora. Akanga achigara muYork, muIreland uye muWales. Yaive ipapo iyo yaakanyora nhetembo yake yekutanga huru yakanzi Mambokadzi Mab.
Muchato waHarriet wakapera, akapedzisira azviuraya, uye Shelley akarasikirwa nekuchengeta vana vaviri vaaive navo. Akabva arwara nazvo tuberculosis uye akaenda kuItari muna 1818. Akanga atoonana Mary Wollstonecraft, mwanasikana wemuzivi William Godwin, uye aive atizawo naye.
Vaigara muMilan, Venice, Naples neFlorence. Yakanga iri mukati memakore mana ekupedzisira ehupenyu hwake yaakanyora yake ounyanzvi: mutambo wedariro Prometheus akasunungurwa, nhamo VaCenci, nhetembo dzakasiyana-siyana dzerwiyo dzakadai se Ode kuWest Wind, Ode kune lark o The mimosa, uye zvakare elegy Adonai, Akafuridzirwa mushure mekufa kwaJohn Keats.
Shelley akadaro mumwe wevanotungamira vadetembi veChirungu, pamwe naJohn Keats naIshe Byron, shamwari dzako. Mubasa rake, iyo mafungiro uye kutenda mune ramangwana revanhu, asi rakanyurawo mukati melancholy.
Aya ndiwo matanhatu enhetembo dzake pfupi, chaiyo mienzaniso yezvakakosha munhetembo dzake dzese.
Rudo, Rukudzo, Ruvimbo
Rudo, Rukudzo, Kuvimba, semakore
Vanosiya vodzoka, one day loan.
Dai munhu asingafi aive ane simba rose,
Iwe -ignoto uye wakakurisa sezvauri-
iwe waizosiya wako wepamoyo mumweya wake.
Iwe, nhume yekuda,
kuti iwe unokura mumaziso emudiwa;
Imi munochengeta kufunga kwakachena
rakasviba kumurazvo unofa!
Usasiye kana mumvuri wako wasvika pakupedzisira:
pasina iwe, sehupenyu uye kutya,
guva ichokwadi chakasviba.
Semwana mudiki ndaitsvaga zvipoko
mudzimba dzakanyarara, mumapako, mumatongo
nemasango ane nyeredzi; nhanho dzangu dzinotyisa
vaishuwira kutaura nevakafa.
Akadana mazita iwaya ekutenda mashura
anoisa. Kutsvaga kwaive pasina.
yehupenyu, panguva iyo mhepo inoshatirwa
hwakawanda sei hupenyu uye fecund
shiri itsva nemiti,
pakarepo mumvuri wako wakawira pamusoro pangu.
Huro yangu yakaridza mhere yekufara.
Ndinotya kutsvoda kwako
Yakanyorwa muna 1820, yakabudiswa mushure mekufa muna 1824.
Ndinotya kutsvoda kwako, musikana munyoro.
Haufanire kutya zvangu;
Mweya wangu waziya musina chinhu,
Haikwanise kunetsa yako.
Ndinotya kutakura kwako, zviratidzo zvako, chikonzero chako.
Kuzvipira uye zvinoreva hazvina mhosva
neavo vanodiwa nemi nemoyo wangu.
Yakauya kubva kumafairies
Yakabudiswa mushure mekufa muna 1839 anthology, Nhetembo Mabasa, rakapepetwa naMary Shelley.
Ndakadhakwa newaini iya yeuchi
yekokonati yemwedzi iyo iyo fairies
inounganidzwa mumagirazi ehiakasiyati:
imba yekurara, zviremwaremwa uye zvipfukuto
vanovata mumikaha kana muuswa,
muchivanze chisina vanhu uye chakasuruvara cheimba;
waini payakateukira pamusoro penyika yezhizha
kana pakati pedova dova raro rinokwira,
vanofara maroto avo anofadza vanova
uye vavete, vanogunun'una nemufaro wavo. zvakanaka ivo vashoma
iyo mafairies anotakura iwo machalices nyowani.
Kana mazwi nyoro achifa
Izvi zvinogona kudaro imwe yeakanakisa uye inoonekwawo seimwe yeanomiririra zverudo. Kutaura kwekusingaperi kwekuti zvimwe chokwadi nemanzwiro hazvikanganwi uye zvinoramba zvakamira mundangariro nemumoyo zvisinei nekufamba kwenguva.
mimhanzi yake ichiri kudedera mundangariro;
apo zvinotapira violets zvinorwara,
Kunhuwirira kwayo kunogara panjodzi.
Mashizha e rosebush, panofa ruva,
akaunganidzwa pamubhedha wemudiwa;
Uye saka mupfungwa dzako, kana waenda
rudo pacharwo rucharara.
Yakanyorwawo muna 1820 ikaburitswa mu anthology kubva 1866: Nhetembo dzakasarudzwa naPercy Bysshe Shelley.
Zvitubu zvinosanganiswa nerwizi,
Mhepo dzedenga dzinosangana nekusingaperi,
Hapana chinhu chiri munyika chakasarudzika
Zvinhu zvese nemutemo waMwari
Sei ndisingafaniri kuzviita newe?
Ona makomo kutsvoda denga rakakwirira
Uye mafungu anopururudzira pamhenderekedzo.
Hakuna ruva raizove rakanaka
Kana iwe ukazvidza hama dzako:
Uye chiedza chezuva chinoda nyika,
Uye iwo maratidziro emwedzi anotsvoda makungwa:
Chii ichi rudo rwese rwakakosha
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Percy Bysshe Shelley. Nhetembo pfupi nhanhatu dzebhavhadhe rake.